Aha! Jokes, Satire » မစုန်တဲ့ဖူးဆာ Starring: Michael Johnny Aung Pu, Big Mirror and Victim Cat	13
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Dec 1, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Gossip, Rumor | 13 comments
သံပြား says: များလဲ တိုတိုဂျော်လကီ အောင်လပုကိုဘဲ ခြစ်မယ်
သုဘရာဇာ သံချောင်း says: ​ဆွေမျိုး​ပေါက်​​ဖော်​​တွေ ပြန်​​တွေ့ရတာဝမ်းသပါတယ်​
ဇီဇီခင်ဇော် says: ချက် ဆို နခေါင်းက မီးတောက်တယ် ပြောပါအေ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 17
mgsai says: အုကြောင် အမြီးကြီးထောင်
kai says: တနေ့က.. ဘော်ဒါနယ်စပ်သွားလေ့လာမယ်ဆိုပြီး.. မက်ဟီကိုပြည်ထဲရောက်သွားတာ…
နောက်ပြီး.. တကယ်ပြောတာ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 963
koaung says: ကိုအောင်ပုကပြောပါတယ် စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့သီချင်းလေးနားဆင်ကြည့်ပါတဲ့းးး)))
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 963
koaung says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 963
koaung says: ရိုက်တာမှားသွာတယ် love is secret နားဆင်ကြည့်ပါl::::))))) sorry
koaung says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: ကအောင်လည်း.. ပြန်ပေါ်လာ..။
koaung says: မြင်းကမလှုပ်​ ​ကြောင်​ကလှုပ်​ ငုတ်​တုတ်​မ​နေနိုင်​ (အရဂါးစတာ) မင်​ဂလာပါသူ ကြီးခင်​ဗျား အကူအညီလိုရင်​​ပြောပါဗျာ :-) :-) :-)
ムラカミ says: ညှီထှာဗျာ
koaung says: ဇတ်တူသားမစားဘူးကွယ်(ဈေးကြီ:ပြီ:မဘသကြောက်လို့) မတော်အိင်:စိန်မှာထမင်းခုနှစ်နှစ်ခေါ်ကြွေးလိုက်လို့ မောင်ဂျီ:မပြန်နိုင်တယ်ဖြစ်သွားမယ်